China Slurry Pump Material Selection orinasa sy mpamatsy | YAAO
Ao anaty paompy slurry ny impeller sy ao anaty casing dia miharihary hatrany amin'ny slurry ary tsy maintsy arovana mifanaraka amin'ny akanjo.
"Ny fisafidianana fitaovana ho an'ny impeller sy casing dia zava-dehibe toy ny safidin'ny paompy ihany!"
Misy fepetra telo samihafa izay mamorona akanjo amin'ny paompy slurry:
Misy karazana abrasion telo lehibe:
Ao amin'ny paompy slurry dia matetika isika no mampihetsi-po sy mampihena ny fihenjanana.
Ny tahan'ny abrasion dia miankina amin'ny haben'ny sombiny sy ny hamafiny.
Ny abrasion dia mipoitra amin'ny faritra roa ao anaty paompy slurry:
1.Anelanelan'ny impeller sy ny fidirana mijanona.
2. Eo anelanelan'ny tsoratra sy ny fonosana mijanona.
Ity no akanjo manjakazaka amin'ny paompy slurry. Ny antony dia ireo potika ao anaty slurry ireo dia mikapoka ny velaran-javatra amin'ny lafiny samihafa.
Ny fitafiana erosion dia miorina mafy amin'ny fomba fampiasana ny paompy. Ny fitafiana erosion dia amin'ny ankapobeny, farafaharatsiny farafahakeliny amin'ny tahan'ny BEP ﬂ ow, ary mitombo miaraka amin'ny fikajiana ambany sy ambony kokoa.
Noho ny antony tsy takatra tsara dia mety hitombo be koa ny fikajiana ny riaka raha avela hiasa amin'ny "snore" ny paompy; izany hoe, mitondra rivotra ao anaty fantsona miditra.
Nisy nanolo-kevitra fa mety ho avy amin'ny cavitation izany, noho ny fiparitahan'ny paompy mihetsiketsika rehefa misidina eo ambonin'izy ireo ny rivotra. Saingy, tsy maintsy ekena ho toy ny vovon-drivotra amin'ny ankapobeny ny famoretana ny cavitation amin'ny alàlan'ny fivezivezena hamaky ireo lavaka etona.
Misy karazan-tany eran-tany telo lehibe:
Ny vokatry ny fikaohon-tany amin'ny singa paompy:
Ny impeller dia iharan'ny fitafy (avo sy ambany) amin'ny ankapobeny eo amin'ny maso, eo amin'ny lafon'ny lamba (A), rehefa mihodina 90 ° ny ﬂ ow. Eo amin'ny sisin'ny lohan'ny vane (B).
Ny fandriana mikorisa sy ny fiatraikany amin'ny zoro ambany dia mitranga eo anelanelan'ny vanes eo anelanelan'ny lambam-baravarana (C).
Valan-tseranana (valiny miditra sy miverina)
Ny valin'ny sisin-damba dia iharan'ny fandriana mikorisa ary manorotoro sy manosotra makotraka.
Ny volute dia iharan'ny fiatraikany amin'ny rano tapaka. Ny fandriana mikorisa sy ny fiatraikany amin'ny angotra ambany dia mitranga amin'ny sisa amin'ny volute.
Ny harafesina (sy ny fanafihana simika) an'ireo faritra mando ao amin'ny Slurry Pump dia tranga sarotra iadiana amin'ny vy sy elastomer.
Ho fitarihana, ny latabatra fanoherana simika ny metaly sy ny fitaovana elastomer dia omena amin'ny tabilao manaraka sy ao amin'ny tabilao fanoherana simika.
Max. Soso-kevitra Impeller
Temp fanompoana lehibe indrindra. (OC)
Indraindray tsy tapaka
(-50) ka hatramin'ny 65 100
Fiarovana amin'ny akanjo - safidy inona?
Misy safidy lehibe sasany amin'ny fisafidianana ny fiarovana ny akanjo amin'ny paompy slurry:
Impeller sy casing ao amin'ny Hard Metal amin'ny alloys vy sy vy fotsy isan-karazany.
Impeller amin'ny elastomers sy casing arovan'ny elastomer liners. Elastomer dia mazàna amin'ny lafiny samihafa na polyurethane.
Fampifangaroana ny impeller ny metaly mafy sy ny vy voaravaka elastomer.
Fisafidianana fitaovana fitafy
ny safidin'ny faritra anaovana dia fifandanjana eo amin'ny fanoherana ny akanjo sy ny vidin'ny ampahany amin'ny fitafiana.
Misy paikady roa hanoherana ny akanjo:
Ny fitafiana fitafiana dia tsy maintsy sarotra ny manohitra ny fihenan'ny hetsi-panoherana! na Ny fitaovana fitafiana dia tokony ho elastika mba hahafahany mandray ny fahatairana sy ny fihemoran'ny poti!
Parameter ho an'ny fifantenana
Ny fisafidianana ny faritra anaovana dia matetika mifototra amin'ireto masontsivana manaraka ireto:
Habeny mivaingana (matevina SG, endrika ary hamafiny)
pH sy akora simika